YINTONI IAKHAWUNTI YOMATSHINI WE-ASP.NET? UNGAYICIMA NJANI? - ITHAMBILE
Yintoni iakhawunti yoMatshini we-ASP.NET? Ungayicima njani?
Iiakhawunti zomsebenzisi wasekhaya kwiWindows luphawu olukhulu xa abantu abaninzi besebenzisa iPC efanayo kwaye banqwenela ukugcina imfihlo yabo. Nangona kunjalo, into engaqhelekanga ibonakala ngathi iyenzeka kubasebenzisi abaninzi, njengoko iakhawunti entsha ebizwa ngokuba ngumatshini weASP.NET ubonakala kwiPC yabo. Ukuba ukhe waqubisana nale ngxaki kwaye ukhathazekile ukuba elinye ilungu losapho lidlale i-prank engenangqondo, ke qiniseka. Esi sikhokelo siza kukunceda uqonde Yintoni iakhawunti yoMatshini weASP.NET kwaye ungayenza njani le akhawunti intsha yomsebenzisi kwiPC yakho.
Yintoni iakhawunti yoMatshini we-ASP.NET?
Ngaba ndingayicima iAkhawunti yoMatshini ye-ASP.NET?
Indlela yoku-1: Phinda ufake kwakhona iSakhelo seNET
Indlela yesi-2: Susa ngesandla iAkhawunti yoMsebenzisi
Ngelixa kuyindalo ukucinga ukuba umba ubangelwa yintsholongwane, iakhawunti entsha yendawo iveliswa sisoftware yeMicrosoft ebizwa ngokuba yiNET Framework. Eli nqaku lifakwe ngokuzenzekelayo kwizixhobo ezininzi zeWindows kwaye liququzelela ukusebenzisana kolwimi. Oku kwenza i-NET Framework isebenze kwimidlalo eyahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kwekhowudi ekufuneka ifundwe yiWindows.
Iakhawunti yoMatshini ye-ASP.NET yenziwe ngokuzenzekelayo xa iNkqubo yeNET ifakiwe kwisixhobo seWindows. Amathuba ale akhawunti azenzele ngokwawo aphantsi kwaye ihlala inempazamo ngexesha lenkqubo yokufaka ekhokelela ekwenziweni kweakhawunti ye-ASP.NET Machine.
Iakhawunti yoMatshini ye-ASP.NET ifumana amalungelo okuphatha ngelixa isenziwa kwaye ngamanye amaxesha ibuza abasebenzisi iphasiwedi ngelixa ungena. Ngelixa ungaqhubeka nokusebenzisa iakhawunti yakho ephambili, iakhawunti ye-NET ibeka isoyikiso kukhuseleko lwePC yakho. Inokulawula iakhawunti yakho kwaye ikukhiye ngaphandle kwikhompyuter yakho. Ngethamsanqa, kunokwenzeka ukuba ucime iakhawunti yoMatshini ye-ASP.NET ngesandla kwaye ukhusele iPC yakho ekubeni ithathwe.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, le akhawunti engafunekiyo ibangelwa ziimpazamo kwinkqubo yofakelo lwesoftware. Ukubeka kwakhona iSakhelo yenye yeendlela ezilungileyo zokukhupha umba. Isakhelo seNET sesinye sezona zicelo zaziwayo nezona zifumaneka ngokulula ezenziwe yiMicrosoft. Unga Khuphela iifayile zokufaka ukusuka Microsoft ichaphaza net iwebhusayithi kwaye ulandele inkqubo yokufaka ngokubanzi kwi-PC yakho. Qalisa kwakhona iPC yakho emva kofakelo kwaye impazamo kufuneka isonjululwe.
Iiakhawunti zomsebenzisi wasekhaya ezikwiWindows zinokususwa ngokulula njengoko zinokongezwa. Ukuba iakhawunti iyaqhubeka ukubakho emva kwenkqubo yokufaka kwakhona, ungayisusa ngokusebenzisa iphaneli yokulawula, ngaphandle kokutshintsha okanye ukusebenzisa nawaphi na amagama okugqitha.
1. Kwi-Windows PC yakho, vula iPhaneli yoLawulo.
ukubeka iliso kuyacima kwaye ngokungacwangciswanga
Ukusuka kukhetho oluvelayo, Cofa kwi 'Akhawunti yomsebenzisi' ukuqhubeka.
3. Cofa apha 'Susa iiAkhawunti zomsebenzisi. '
4. Apha, khetha umatshini we-ASP.NET akhawunti kwaye uyisuse kwiPC yakho.
Uyifaka njani iMicrosoft .NET Isakhelo 3.5
Lungisa uMatshini oSebenzayo weJava okanye i-JVM ayifumanekanga mpazamo
Ukulungiswa kweWindows akunakulugqiba utshintsho oluceliweyo
Ungalibona njani ixesha lokuPhumla kwi Windows 10
Ngaphandle kokuba iMicrosoft ibe lelinye lawona maqonga asebenza kuwo kwintengiso, iimpazamo zale ntlobo zisavela kubasebenzisi abaninzi. Nangona kunjalo, ngamanyathelo akhankanywe apha ngasentla, kuya kufuneka ukwazi ukujongana nale mpazamo yomgaqo-nkqubo kunye nokukhusela iPC yakho kwiiakhawunti zomsebenzisi.
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sasiluncedo kwaye wakwazi ukuqonda Yintoni iakhawunti yoMatshini weASP.Net kwaye ungayicima njani. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, yibhale phantsi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi kwaye siya kukufikelela.
Ishedyuli yomsebenzi ayisebenzi
khubaza iphedi yokuchukumisa ye-synaptics xa imouse ixhunyiwe
windows 10 susa ukhuselo lokubhala
windows icacisa i-dns cache windows 7
Itunes ayiqali ngewindows 10